Apixaban iyo Rivaroxaban
Sanadihii la soo dhaafay, iibka apixaban si dhakhso leh ayuu u kordhay, suuqa adduunkuna wuxuu horay uga sii dhaafay rivaroxaban. Sababtoo ah Eliquis (apixaban) wuxuu ka faa'iideystaa warfarin ka hortagga istaroogga iyo dhiig-baxa, iyo Xarelto (Rivaroxaban) wuxuu muujiyay oo keliya liidasho la'aan. Intaa waxaa dheer, Apixaban ma ...
Bandhigga Guangzhou API ee 2021
The 86th Shiinaha International Pharmaceutical Raw Materials / Intermediates / Packaging / Equipment Fair (API China for short) Qabanqaabiyaha: Reed Sinopharm Exhibition Co., Ltd. Waqtiga Bandhigga: Meey 26-28, 2021 Goobta: Shiinaha Soo Dhoofinta iyo Soo Dhoweynta Carwada Dhexdeeda (Guangzhou) Cabirka carwada: 60,000 mitir murabac ah Ex ...
Bishii Juun 29, Daawada Daaweynta ee 'Intercept Pharmaceuticals' ayaa ku dhawaaqday inay ka heshay dalab cusub oo dawooyin ah US FDA oo ku saabsan FXR agonist obeticholic acid (OCA) ee fibrosis ee ay keento warqadda Jawaabta ee steatohepatitis-ka aan khamriga ahayn (CRL). FDA waxay ku sheegtay CRL taas oo ku saleysan xogta ...
Bishii Oktoobar 22, waqtiga Bariga, US FDA waxay si rasmi ah u ansixisay Gilead's antiviral Veklury (remdesivir) si loogu isticmaalo dadka qaangaarka ah 12 sano iyo wixii ka weyn miisaankooduna yahay ugu yaraan 40 kg oo u baahan isbitaal dhigid iyo daaweynta COVID-19. Sida laga soo xigtay FDA, Veklury hadda waa midka kaliya ee FDA-ansaxisay COVID-19 t ...
Dhawaan, Nantong Chanyoo waxay sameeyeen taariikh kale oo taariikhi ah! Dadaalka in kabadan hal sano, KDMF-tii ugu horeysay ee Chanyoo waxaa ogolaaday MFDS. Maadaama aan nahay soo saaraha ugu weyn ee Rosuvastatin Calcium dalka Shiinaha, waxaan jeclaan lahayn inaan u furno bog cusub suuqa Korea. Iyo alaabooyin badan ayaa b ...
Cudurka faafa ee caalamiga ah ee COVID-19 wuxuu bedelay diirada loo saaray kahortaga faafida iyo xakameynta infekshinka dhamaan meelaha aduunka. WHO wax dadaal ah ugama tageyso inay ugu baaqdo quruumaha oo dhan inay xoojiso midnimada iyo iskaashiga la dagaallanka cudurka faafa ee faafa. Dunida saynisku waxay raadisay ...